ရီစရာ Archives - Page3of3- YomaLan
မှတ်မှတ်ရရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တွင် ဓမ္မာစရိယ (ဘီအေ) တန်းနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေစဉ်ကဖြစ်၏။ ဘွဲ့ယူစာတမ်းရေးတင်ရန်အတွက် ပရင်တာတလုံးမဖြစ်မနေလို့အပ်နေ၍ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတပါးနဲ့ ပေါင်းပြီး ပရင်တာတလုံးဝယ်ရန် ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးလမ်းက ကွန်ပျူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ၀င်လိုက်ကြ၏။ …
လေယာဉ်မယ်လေးတွေရဲ့ စကားနားမထောင်လို့ ဘ၀ပျက်ပြီး ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ အမျိုးသား
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. …
ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ အလုပ်သွားနေတုန်း ဇနီးသည်က တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်လေသည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ၉ နှစ်အရွယ်သူ့သားလေး အိပ်ခန်း ဗီရိုထဲဝင်ပုန်းနေတာကို သတိမထားမိခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက …
မောင်​ မပြီး​သေးဘူးလားကွာ အာ​တွေ​တောင်​​ညောင်းလာပြီ ပြီး​တော့ ​မောင့်​ဟာကြီးက တိုတိုတုတ်​တုတ်​ကြီးဆို​တော့ မနည်းထိန်းမူတ်​​နေရတယ်​ တစ်​ဆုံးကပ်​မူတ်​​လေ​လေ နံလာ​လေ​လေပဲ မျက်​ရည်​​တောင်​ဝဲတယ်​​မောင်​ရယ်​” သူမ ကျ​နော်​ဟာ​လေးကိုပါးစပ်​က အသာခွာရင်း …